Oonobumba neminqwazi → Impahla yokusebenzela • ubuchwephesha bobuchwephesha be-P & M
Amanqindi yaye imisipha ziyinxalenye yezixhobo BHP ziyafuneka kwiindawo zokusebenza ukwanda komngcipheko. Ubomi kunye nokukhuselwa kwezempilo.
Iimveliso ezikhoyo ngo-pm.com.pl zisiwa ngabavelisi abaziwayo. Uluhlu olubanzi likuvumela ukuba ukhethe ngokulula into efanelekileyo kulo msebenzi. Siqinisekile ukutyebisa rhoqo umnikelo wethu ngeemveliso ezintsha.
Isithembiso sethu sandisile nge-balaclavas eluncedo ngakumbi ebusika, izikhafu zetshimini, iminqwazi yabapheki, amakhaka obuso, ii-mesh caps zeshishini lokutya kunye nabanye. Enkosi kwintsebenziswano rhoqo nabavelisi kunye nomthamo ophezulu weeodolo, siyakwazi ukubonelela ngamaxabiso anomtsalane kunye nokukhetha okubanzi, kunye nezaphulelo ezongezelelweyo kubathengi abaqhelekileyo.
Isigcina-ntloko sokhuseleko, isigcina-ntloko sokhuseleko
Izigcina-ntloko zentuthuzelo nokhuseleko
Izigcina-ntloko inokulungelelaniswa neemfuno zakho njengoko zinemiba yohlengahlengiso ekuvumela ukuba uhlengahlengise kwiimfuno zakho. Ukuguquguquka okunje kweminqwazi kuguqula ukhuseleko kunye nokhuseleko.
Izigcina-ntloko ezifakwe kakuhle, ngomzuzu wempembelelo, o.k.t.usentla, unokutyibilika ngokulula, ubeka entloko ukwenzakala okunzima. Sinikezela ngeemodeli ezininzi ngemibala eyahlukeneyo. Izinto ezivela kuzo iminqwazi zokukhusela intloko ziyamelana nefuthe elibi lezinto zangaphandle, kwaye akukho zinto zinetyhefu ezisetyenzisiweyo ukuzenza.
Iminqwazi zokuzikhusela lonke ixesha lonyaka
Kwivenkile yethu, sinikezela ngokuqinileyo kwaye kumnandi ukunxiba iminqwazi yokukhusela ngobukhulu obahlukeneyo obulungele amaxesha onyaka ohlukeneyo. Ngentwasahlobo nehlobo, sicebisa iminqwazi elula ekhusela ukukhanya kwimitha yelanga.
Ebusika, ngakumbi kumaqondo obushushu asezantsi kakhulu, iminqwazi egqunyiweyo ifanelekile njengoko ibugqume ngokufanelekileyo ubushushu bentloko. Sibancoma kakhulu kubantu abasebenza ngaphandle kwiimeko zemozulu ezinzima. Sineemodeli zabasetyhini nezamadoda esinokukhetha kuzo, eziququzelela ukukhethwa kweemveliso.
Kulabo bafuna iminqwazi yokukhanya ekhuselayo efana nekepusi ene-visor, sinokukhetha kwiimodeli ezivela kubavelisi beJSP kunye neReIS.
Ukukhanya iminqwazi bonelela ngokhuseleko olusisiseko kwiimpembelelo ezichasene nezinto ezinzima. Embindini kukho ukufakwa okwenziwe nge-HDPE okanye iplastiki ye-ABS ngenkqubo yokufunxa, ukongezwe ngezinto zokuthuthuzela.
Amanqindi banemingxunya yokungenisa umoya, imitya yohlengahlengiso, kunye neepokotho zangaphakathi zikuvumela ukuba ususe isiqinisi, ke oko kukuvumela ukuba uhlambe ikepusi okanye wenze ukumakisha oyimfakamfele ngekhompyutha.
Isigcina-ntloko sokhuseleko, somelezelwe nge-embroidery
Umnqwazi Reis zigqunyiwe
iminqwazi yomsebenzi omhlopheiminqwazi yomsebenziiminqwazi yokusebenza enesidangaiminqwazi yomsebenzi wasebusikaiminqwazi ye baseballiminqwazi yokusebenza kwamadoda ebusikaiminqwazi yomsebenzi wasebusikaIzigcina-ntloko zomsebenzi wokukhuselaIzigcina-ntloko zomsebenzi wokukhuselaIzigcina-ntloko zomsebenziiminqwazi yokusebenza kombalaiminqwazi yokusebenza olxIzigcina-ntloko zomsebenzi we-uvex